FARAGELIN HAA, FARAGELIN MAYA! Madoobe wuxuu wadaa siyaasad ay madaxa masaari uga dhacday! | Hadalsame Media
Home Maqaallada FARAGELIN HAA, FARAGELIN MAYA! Madoobe wuxuu wadaa siyaasad ay madaxa masaari uga...
FARAGELIN HAA, FARAGELIN MAYA! Madoobe wuxuu wadaa siyaasad ay madaxa masaari uga dhacday!
(Kismaayo) 16 Luulyo 2019 – Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somalia ee James Swan oo shalay booqday magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay booqashadiisa Kismaayo iyo wixii ay isla soo qaadeen madaxda Jubbaland.
Swan ayaa lagu warramayaa inuu Madaxwaynaha Jubbaland ee Axmed Madoobe la jeexjeexay arrimo u badan doorashada maxalliga ah ee lagu wado inay halkaa ku qabsoonto bisha Agoosto.
Wuxuu ergaygu soo jeediyay in aan doorashadaa la faragelin, iyadoo ay dad badani warkaa u leexiyeen dhanka DF Somalia, balse su’aashu waxay noqonaysaa soow faragelin maaha in ergayga QM uu dhex boodo doorasho maxalli ah isla markaana uu u dhexeeyo dal iyo gobolkiis.
Haddiise uu Axmed Madoobe faragelin diid yahay maxaa keenaya inuu u dhega nuglaado ninkan aan Soomaaliga ahayn, balse uu ku dhega adaygo DF oo ah midda sharciyan dalka ka talisa? Dalka ma QM ayaa ka talisa mise DF Somalia? Faragelinta lafteedu ma midda meelaha kale ka imanaysaa soow ma muuqato in Axmed Madoobe uu yahay ninka faragelinta ugu badan ku sameeynaya doorashadan?
Aragtida ay bixinayso hab-dhaqanka madaxda gobolladu waa in ay Somalia abidkeed sidaa u kala daadsanaato oo sidaa loo dhex boodo, iyagoo u muuqda qaar ka gilgisha wixii wanaag u ah dalka Somalia, balse ogol wax kasta oo dib u dhigaya.
Waayo marka faragelin laga hadlo, dunida kama jirto dowlad la leeyahay dalkeedii ayay faragelisey, balse halkan waxaaba taagan ninkii shisheeyaha ahaa oo inta dalkii siduu doono ka yeelo dadkii wax magaradka ahaa u tusaya inay dowladoodii cadow u arkaan, isaga yeeriskiisana maqlaan.
Haddii ay madaxda maamulladu qaabaddaa kusii wadaan, wax kale maahane waxaa soo deg degi doona cimriga xukunkooda, waayo waxaa hubaal ah inay shacabku daaleen oo sii bislaanayaan maalinba tan xiga, isla markaana aan hadda kaddib lasii dhegeysan doonin siyaasado micne darro ah oo danaysi gaar ah iyo dib u socod guud ku dhisan.
Previous articleDAAWO: ”Afarta gabdhood” oo qabtay shir jaraa’id oo ay ku geesa garaaceen Trump
Next article”Fadlan yaan lay TARXIILIN!” – Maxaad kala socotaa warqad catoow ah oo uu qoray Trump awoowgii si aan loo musaafurin!